Ahoana ny fandoroana CD amin'ny mozika na horonan-tsary amin'ny solo-sainanao | Vaovao momba ny gadget
Ahoana ny fandoroana CD amin'ny mozika na horonan-tsary amin'ny solosainao
Paco L Gutierrez | | General, Sary sy feo, Software
Araka ny efa noresahintsika tamin'ny a lahatsoratra ao amin'ny Technology Guides izay nasehonay ireo programa tsara indrindra hanovana ireo CD mozika ho MP3, ny endrika ara-batana maty tsikelikely. Mihasarotra hatrany ny mahita fitaovana misy tohana amin'ny kapila, ny fironana dia ny atiny nomerika. Be loatra, ka saika tsy misy fiara tonga miaraka amin'ny fanohanan'ny kapila, ary koa ny solosaina finday.
Manondro ny atiny streaming na amin'ny fangatahana ny tsena, izay misongadina ny serivisy toa ny Netflix, Spotify na Amazon Prime, izay samy manana serivisy mozika sy horonan-tsary. Fa raha iray amin'ireo mbola maniry hanararaotra ilay mpitam-boky izahay hampiasa ny horonantsary na ny mozika amin'ny kapila, manana programa mety mifanaraka amin'izany izahay mba hanoratra izany amin'ny fomba tena tsotra. Mila solosaina misy mpandoro kapila fotsiny isika na hividy ivelany.
1 Inona no azontsika raketina ary inona?
2 Fandaharana handoro kapila ao Windows
2.4 Fitaovana DAEMON Lite
3 Fandaharana handoro kapila ao anaty macOS
3.1 Express mandoro
Inona no azontsika raketina ary inona?
Azontsika atao ny milaza fa zavakanto hadino io, ireo fotoana niainantsika voahodidin'ny kapila banga vonona hodorana amin'ny solosaintsika; be loatra ka Na amin'ny fivarotana rehetra, na kely na kely aza, dia nahita rakitsoratra novidiana izahay; Izany rehetra izany dia navadika tany ambadika tany noho ny serivisy mivantana na on-demande araka ny efa nolazainay.
Na izany aza, tsy mampaninona mihitsy ny manana safidy hafa hiantohana ireo kapila mozika ankafizintsika na horonantsary izay tiantsika ny hanohy hankafy fa mitazona ilay hadio tany am-boalohany tao anaty boaty. Eny, ry fantsakana programa na famelabelaran-kevitra tianay hitaterana any amin'ny toerana tsy ahafahantsika miditra amin'ny solosaina fa amin'ny mpilalao (zavatra tsy dia mahazatra loatra). Izahay dia hanome soso-kevitra hisafidianana programa handraisana an-tsoratra ny karazana rakitra amin'ny CD, DVD na BLU-RAY.
Fandaharana handoro kapila ao Windows
Izy io dia iray amin'ireo programa tranainy indrindra, miaraka amina interface fohy sy somary lany andro rehefa mandeha ny fotoana, saingy tena intuitive sy tsotra. Ity programa ity dia ahafahantsika manoratra izay azontsika eritreretina, na inona na inona endrika ilaintsika ary ny tsara indrindra dia maimaimpoana tanteraka izany.
Izy io dia mifanaraka amin'ny kinova Windows rehetra, manomboka amin'ny Windows 95 ka hatrany amin'ny Windows 10 farany tsy ela. Io dia hahafahantsika mirakitra fampahalalana ara-batana, na dia ny tsy mahazatra indrindra toa ny endrika ampiasain'ny XBOX 360 (HD DVD) aza.
Azontsika atao ny mandoro ilay kapila indray mandeha, manamarina izany amin'ny alàlan'ny rindrambaiko hahazoana antoka fa 100% fa azo vakiana tanteraka amin'ny mpamaky rehetra. Azontsika atao ny manova ny haben'ny buffer na manafina ny kapila misy sonia nomerika.
Ao amin'io LINK azontsika atao ny misintona ny programa.
Ny programa dia novolavolaina mba ho safidy tsara indrindra hamoronana kapila virtoaly na sary klona. Izy io dia mifanaraka amin'ny endrika tsy tambo isaina, ao anatin'izany: mds, iso, bwt, b5t, b6t, ccd, isz…. Tsy isalasalana fa mety izy io amin'ny famoronana kopia nomaniny ho solon'izay azontsika eritreretina. Ohatra, mila kopian'ny CD isika hametrahana Windows; miaraka amin'ity programa ity dia hataontsika ao anatin'ny minitra vitsy.
Miaraka amin'ny alikaola 120%, ny cloning disk rehetra dia resaka dingana vitsivitsy vitsivitsy, izay amin'ny alalany interface tsara Ny mpampiasa rehetra dia afaka manao na tsy dia manam-pahaizana aza izy.
Ao amin'io LINK azontsika atao ny misintona azy.
Fandaharana tranainy sy tranainy iray hafa, miaraka amina interface tsara izay, na dia archaic sy fohy aza, dia voalamina tsara ka tena tsotra sy intuitive. Misy fiteny misy ka tsy ho olana ho an'ny mpampiasa ny fiteny. Ny programa dia mifantoka amin'ny fandraisam-peo na inona na inona karazana, afaka mamorona fanangonana làlana isika ao MP3, AAC, WAV, FLAC na ALAC.
Na dia azontsika atao aza ny maka tahaka fotsiny ireo rakitra toa ny hoe Pen drive. Izany rehetra izany dia azo tanterahina amin'ny CD sy DVD. Mifanaraka amin'ireo kinova Windows rehetra nanomboka tamin'ny 2000, XP ka hatramin'ny Windows 10. Manana mpilalao mitambatra izy io, nefa tsy isalasalana fa tsy ho ny fampiasana omentsika azy io, fa eo io.
Fitaovana DAEMON Lite
Izy io dia programa fanasoavana ho an'ny "Mpamorona" ny atiny. Ny tena asany dia ny tsy handoro kapila ho an'ny feo na horonan-tsary, fa kosa dia mifantoka amin'ny famoronana sary virtoaly, toy ny ISO. Amin'ireo rehetra navoakanay hatreto, tsy isalasalana fa ilay mankafy ny interface maoderina indrindra, hoy aho momba ny lisitra iray manontolo, saingy mitovy hevitra sy tsotra ihany koa.
Andao lazaina fa ity programa ity ny mety indrindra amin'ny fandraisam-peo, ohatra, lalao video na sarimihetsika, na amin'ny DVD na BLU-RAY. Mamela antsika hanao azy io amin'ny fizarazarana maromaro raha ilaina izany. Ny kinova maimaimpoana dia misy doka, saingy io no vidiny aloa raha tsy te-handoa vola amin'ny paosintsika isika. Na dia manana safidy hividy ny fahazoan-dàlana mandritra ny androm-piainana tsy voafetra amin'ny € 4,99 ihany, izay hanome antsika ny fahafaha mametraka azy amin'ny solosaina telo.
Azontsika atao ny misintona ny programa amin'izany LINK.
Eny, afaka mandoro kapila mozika isika nefa tsy mila mametraka na inona na inona amin'ny solosainantsika raha toa ka manana Windows napetraka ianao. Avy amin'ny Windows XP ka hatramin'ny 10, endri-javatra mahasoa ity izay miaraka amin'ny Windows Media Player.
Tsy misy fisalasalana Safidy ho an'ireo izay tsy mila manoratra tsindraindray ilay CD mozika hafahafa fotsiny. Satria voafetra be io ary zara raha manome anao safidy ho an'ny firaketana, na dia mandeha tsara sy tsara aza ny kalitaon'ny kopia. Ny tsara indrindra dia tsy mila manao fametrahana na misintona fanampiny isika.
Fandaharana handoro kapila ao anaty macOS
Isika izay mampiasa vokatra paoma dia manan-jo handoro ny kapila misy antsika ihany koa, koa hanome vahaolana hafa handefasana azy ireo ao amin'ny rafitra fiasa macOS isika. Ny karazany dia tsy dia be loatra, fa afaka mankafy safidy tsara toy ireo ao amin'ny Windows ihany koa isika.
Atombotsika amin'izay ho ahy ny safidy tsara indrindra; Ny anarany, araka ny asehony, dia manondro ny hafainganam-pandehany, noho izany dia miatrika programa izay ahafahantsika mirakitra kapila amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa noho ny salanisa, na dia manana ny safidy amin'ny fandraketana azy ireo amin'ny hafainganam-pandeha ambany izahay hiantohana ny kalitao tsara indrindra azo atao.
Miatrika ny iray amin'ireo fampiharana feno indrindra amin'ny lisitra iray manontolo izahay. Afaka maka horonantsary amin'ny AVI na MPG izahay. Mamorona sy tantano ny famakiam-boky DVD ary ovao ny modely ho an'ny menio fitetezana. Azontsika atao ny manampy ny mari-drano amin'ireo rakitsary nataontsika, azontsika atao aza ny manoratra rakitra an-tsary amin'ny PAL na NTSC, ary koa manova ny tahan'ny lafiny ho an'ny pikantsana panoramic.
Izy io dia programa tsotsotra araky ny tondroin'ny anarany. Mandoro ireo CD sy DVD roa. Mihazakazaka amin'ny kinovan'ny rafitra fiasa avy MacOS X toy ny any Catalina. Io dia ahafahantsika mandoro kapila archive, kapila mozika, mamorona disk tsy dia mifanerasera, mampitombo ny kapila ary maro hafa.
Izy io dia programa tena tsotra ampiasaina miaraka amina interface tsara satria tsotra sy minimalist. Ny hany lesoka hitantsika ato amin'ity rindrambaiko ity dia rehefa mandoro DVD ianao dia ilaina fa ny format video dia .mpg. Tsy olana lehibe ny fiheverana fa ny programa dia manova ho azy ny rakitra ho .mpg; Na dia izany aza dia tsy maintsy miandry isika mandritra ny fanovana dia tanterahina alohan'ny firaketana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Ahoana ny fandoroana CD amin'ny mozika na horonan-tsary amin'ny solosainao
Review AUKEY EP T25 Headphone